पाप र धर्मको हिसाबकिताब ! | शहरबाट शब्दहरु
« मेरो आफ्नै समाचार !
जहीँतहीँ ठगिनु नेपालीकै भाग्य »
पाप र धर्मको हिसाबकिताब !	पाप र धर्म । समाजमा यी दुई पाटोको राम्रो हिसाबकिताब राख्ने मान्छेहरूको संख्या कम छैन । फलानाले पाप गर्यो, उसले धर्म गर्यो । ऊ कति ‘पापी’ । ऊ कति ‘धर्मात्मा’ । के मान्छेले मान्छेको पाप र धर्मको मापन गर्नसक्छ ? पक्कैपनि सक्दैन । फेरि किन हामीहरू पाप र धर्मका कुरामा अडिएर भगवानका शरणमा पुगिरहेका छौं ? एउटा सत्य के हो भने आस्तिकहरूको समर्पण सदा भगवानप्रति रहन्छन् । उनीहरू सदा फुर्सदमा मठमन्दिर पुग्छन् । धुपबत्ती गर्छन् । दर्शनमा भेटी चढाउन भुल्दैनन् । अनि मन्दिरको छेऊमा दुःखीलाई नदेखे जस्तैगरि छिःछि गर्दै घर फर्किन्छन् । जसले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका ‘कुन मन्दिरमा जान्छौं यात्री’ पढेका छन्, जसले परिभाषा बुझेका छन् । उनीहरूको श्रद्धा र भक्ति मन्दिरभित्रको ढुङे मुर्तिमा भन्दा गरिब मान्छेको सेवामा तत्पर रहन्छन् । केहीदिन अघिको रामनवमी । चैते दशैंका रूपमा धेरैले यसलाई धुमधाम शैलीमा मनाए । शुभदिन परेकोले म पनि संकटा मन्दिर पुगेँ । मन्दिरमा दर्शनका लागि बसेका लाईन चार फेरो घुमेको थियो । यति व्यापक भीडमा ठेलमठेल र पूजाआजाका साम्रागीको बिक्रीपनि अरू दिनभन्दा ज्यादा थियो । यहाँ धर्म कमाउने र बेच्ने ताँती गनी साध्यै थिएन ।
‘पाँचको दुईवटा बत्ती’देखि लिएर भगवानलाई ‘बती बाल्नुस्’ भन्ने भीडहरू यत्रतत्र त्यही दर्शनार्थीका भीडमा मिसिएका थिए । मन्दिर छेऊ पूजाको साम्रागी भनेर बेच्दै गरेकाले २० रूपैयाँ भगवानकै अघि ठगिरहेका छन् । पूजा गर्न आएकाले दश÷बीस रूपैयाँ हेर्देनन् । त्यसैको फाइदा कमाएर पैसा पोल्टामा बाँधिरहेका छन् । अचम्म यहाँ ‘कमाएका’ले धर्मका नाममा चढाएका छन् । ‘खाए खाओस्’ भनेर । अनि कमाउनेले ‘भगवान तिम्रै शरणमा छु’ भन्दै ठग्दै आइरहेका छन् । कसको भागमा कति धर्म पर्यो ? कसले कति धर्म बोक्यो ? कमाएकाले खर्चिएर धर्म कमायो की मन्दिरमा बती बेच्नेले माध्यम बनेर धर्म कमायो ? गन्न नसक्ने भीडका केही मान्छेहरू ग्रहदशा काट्न लामबद्ध छन् गुरूहरूका । बेफुर्सदी बनेका बाबाहरू मन्त्र जप्दै, शास्त्र पढ्दै राहुकेतु भगाउने ‘अभियान’मा लागेका छन् । दक्षिणाका नाम सयदेखि माथि चढाउन लगाएर मन्दिरकै सामु ‘ग्रहको दशा नाश’ गरिरहेका छन् ।
पाप र धर्मको मापन विवरण कोहीसंग हुनै सक्दैन। कसले पाप गर्यो ? कसले धर्भ गर्यो ? त्यसको लेखाजोखा हामी रहुन्जेल हुनेछ र कोही कसैले भन्दैमा पाप र धर्मको भागीदार बन्न सकिंदैन। कस्को भागमा कति पाप र धर्म ? त्यो बांचुन्जेल हिसाब हुन्न र मरेपछि त झन् डुम्मै राजा।
उता मन्दिरमा विराजमान संकटा मौन । मन्दिरमा सबैले भगवान साक्षी राखेर सबैले आ–आफ्नै स्वार्थ र भजन गाइरहेका छन् । आस्तिकको भीडमा लुकेर बसेका नास्तिक मन्दिर छेउछाउ नै देखिन्छन् । मैले कहिकतै विद्धानबाट सुनेको छु । पाप र धर्म, हामीअघि नै छन् । सास रहुन्जेल यसको बाँकी बक्यौता हिसावकिताब चुक्ता गर्नुपर्छ । हामीले बोकेको पाप र धर्मको लेनदेन भएसम्म मुक्ति मिल्दैन । यसबारे धेरै जानकार छन् । तरपनि आफुभित्रको पाप नदेखेर धर्म कमाउन अहोरात्र व्यस्त छन् मान्छेहरू । मान्छेलाई कति धर्म भयो भने पुग्ला ? यसको पनि मापन छैन । न हिसाब छ, जीवनभरमा कमाएको धर्मको बारेमा हिसाब । एउटै मान्छेले पाप÷धर्म कमाउँदै छन्, अनि विभिन्न माध्यमबाट बेचिरहेका छन् । मान्छे नै हुन् । आस्तिक वा नास्तिक । पूजाआजामा समर्पण भएपनि वा नभएपनि । विश्वास र सद्भावको एउटा मानिएको बिन्दु सबका हुन्छन् । मार्ग फरक हुनसक्छ तर पुग्ने गतव्य एउटै हो । आखिर पाप÷धर्मको हिसाबकिताबमा हिन्दु, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुश्लिम वा अन्य कुनै धर्म । सबैका आफ्ना नियम हुन्छन् । सद्भाव र समर्पण हुन्छन् । जीवनको यात्रामा संकलित पाप÷धर्मको हिसावकिताब हुन्छन् । बुझेर वा नबुझेर पाप÷धर्मका बारेमा हामी निकै सचेत बनिरहेका हुन्छौं । समाजका पुर्खाले सिकाउँदै आएको सिद्धान्तमा उभिएर पाप÷धर्म छुट्टयाउन जान्यौं । मान्छेमा रहेको यो महानताले अठ्यारा प्रश्नहरू उठाएका छन् । आखिर आजसम्म हामीले कति पाप गरयौं ? कति धर्म गरयौं ? कतै हिसाब छैन् । न कसैले दिनसक्छ ? अस्तु
Explore posts in the same categories: मेरो लेख
This entry was posted on जुन 23, 2012 at 1:58 अपराह्न and is filed under मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.